6-da Qalab & Qalab ee aad Doonaysay ayaa ah Halkan! - WoopShop ®
Sida il biyo soo socdaan, ayaa sidoo kale isbeddello cusub iyo baahida loo qabo qalab cusub oo qurux badan. Aynu daacad noqonno, qalabka waxtarka leh ayaa had iyo jeer wanaagsan in la haysto, oo ay noloshaada oo dhan u fududayn karaan. Marka ay tahay doorashada xulashada waxyaabaha saxda ah, waxaa jira qodobo badan oo tixgelin la siinayo.
Dabcan, wax ku oolnimada, hufnaanta, iyo qiimaha had iyo jeer waxay ka ciyaaraan door weyn marka aad dooraneyso qalabka ugu fiican adiga, iyo WoopShop.com waxaad ka heli doontaa intaas oo dhan iyo intaa ka sii badan. Haddii ay tahay wax gurigaaga, gaarigaaga ama goobta shaqada, haysashada alaabada saxda ah waqtiga saxda ah!
Hoos waxaa ku yaal, fiiri qaybta ugu sarreysa ee '6' oo kaa caawineysa inaad si fudud ula qabsato nolosha.
Qalabyada 6 ee ugu sarreeya iyo Qalabyada Aad U Baahantahay!
1. Difaacaaga dartiis: Qaylo dhaanta badbaadada yar!
Qalabka Degdega ah ee Degdega ah Badbaadinta Badbaadada Gaarka ah ee Gaarka Difaaca Qalabka Nalka
Haddii aad rabto inaad noqoto badbaado dheeraad ah (oo aad had iyo jeer ku habboon tahay), qalabkan yar ee cajiibka ah ayaa kaa caawin doona inaad taas gaadho. Difaaca mini alarm isticmaalaa nal LED ah sidoo kale wuxuu ku daraa tayo iyo waxqabad isla mar. Hayso hantidaada gaarka ah iyo naftaada badbaado oo waxaad ka dhigtaa inta ugu badan oo qaylo-dhaan ah oo la awoodi karo oo waxtar leh!
2. Caafimaadkaaga, intaad gaariga waddo: Falanqeeyaha aalkolka neefsashada ee la qaadan karo!
Falanqeeyayaasha Khamriga Cudurka Nafaqada Aaladaha Daabacaadda ee Daabacaadda
Ku raaxayso madadaalo iyo xaflad si qumman had iyo goorna waxaad u kaxaysaa falanqeeyahaan shaqeynaya iyo waxqabadka. The qalab waa wax fiican in gaariga lagu dhigo, waxayna kadhigi doontaa isticmaalka khamrigaaga. Ha cabbin oo ha wadin baabuur, laakiin u adeegso falanqeeyahaan wax ku oolka ah meel kasta oo aad u wadid habeen xiiso leh!
3. Loogu talagalay taleefankaaga gacanta: Kiisaska taleefanka ilaalin iyo ciyaar!
Qalabka Kumbuyuutarka Qalabka Sifaynaya ee Qalabka Lacageed
Ka fogow waxyeelladaada iPhone-kaaga waxaadna heshaa isku-darka, iftiinka iyo biyo-caddaynta kiisaska telefoonka kuwaas oo si weyn ula shaqeeya dhammaan moodooyinka iPhone. Ayaa ku idhi ma qurxin kartaan taleefankaaga oo madhicin kara? Isla mar ahaantaana, waxaad sidoo kale ilaalinaysaa taleefanka ilaalin haddii ay dhacdo saameyn.
4. Badbaadada Caruurta, Horta!
GPS Tracking & Anti-Lost Smart Watch For Kids leh Flashlight Camera & SOS Call Location For IOS & Android
Sidee ka wanaagsan oo loo dammaanad qaadi karaa nabadgelyada ilmahaaga marka la barbar dhigo taxadarka cajiibka ah ee GPS Tracking & Anti-Lost Smart Watch ee carruurta? Haa, waa sax, teknolojiyadda casriga ee GPS waxay suurtagelineysaa inaad carruurtaada ilaaliso marwalba. Qalabku wuxuu la imanayaa kaamirada tooshka iyo SOS wicitaanka goobta, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon labada macruufka iyo Android.
5. Isku dheelitirnaanta dhammaanteed: Garabka Farta ee Farta ee loogu talagalay Andriod!
Hel waxyaabaha ugu muhiimsan si aad wax uga qabato ugana faa'iideysato waxbadan oo xasaasi ah iyo howlo badan wac telefoonka Android. Biyo-cadeyn iyo saameyn-cadeyn, giraankan cajiibka ah wuxuu ciyaari doonaa heesaha aad ugu jeceshahay, xasuuso dhacdooyin muhiim ah wuxuuna kula xiriiri doonaa taleefankaaga Android il gaar ah! Adduunku marka uu taabto fartaada ... haye!
6. Wixii madadaalo ah: Mini Tripod la qaadan karo oo Telefoonkaaga ah!
Mini Tripod Action Camera & Stand StandFall
Samaynta xusuus waa wax lagu farxo, iyo saxsanaanta iyo indhaha weyn ee si faahfaahsan ayaa door weyn ku leh. Tani fudud oo wax ku ool ah miniod Miyaad sawiro ka qaadi doontaa meelaha ugu cakiran, si kasta oo ay kaaga mahadnaqeyso soojiidashada joogtada ah iyo kuwa la qabatimay!
Dhex gal niyaddaada wax iibsashada oo wax badan ka ogaaw, adoo booqanaya WoopShop.com ama dukaamaysigeena internetka app !